म कसरी यौन संचारित संक्रमणहरू (एसटीआई) लाई रोक्न सक्छु? – Help Center
स्थानीय हिज्जे | Nepali
पप्परहरू के हुन्?
मलाई लाग्छ मसँग यौन संचारित संक्रमण (STI) हुन सक्छ। म यसको उपचार कसरी गर्न सक्छु?
म कसरी यौन संचारित संक्रमणहरू (एसटीआई) लाई रोक्न सक्छु?
यौन संक्रमित संक्रमण (एसटीआई) के के हुन्?
मसँग कन्डम, लुब, वा यौन खेलौना छैन। यसको सट्टामा म के प्रयोग गर्न सक्छु?
म कहाँ मद्दत लिन सक्छु?
के म घरमा एचआईभी टेस्ट लिन सक्छु?
के गर्भावस्था रोकथाम विकल्प ट्रान्सजेंडर व्यक्ति को लागी काम गर्दछ?
मैले भर्खरै यौन संक्रमित संक्रमण (एसटीआई) को लागि सकारात्मक परीक्षण गरें। म कसरी मेरो पार्टनर (हरू) लाई भन्न सक्छु?
सहमति के हो?
एसटीआई रोक्नको पहिलो चरण भनेको बुझ्नु हो कि एसटीआई विभिन्न तरिकामा पारित गरियो। तपाईं यहाँ को बारे मा यहाँ अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ।
कन्डम र दन्त बाँध एस.टी.आई. को प्रसारण रोक्नको लागि एक प्रभावकारी तरिका हो जुन शरीरको तरल पदार्थहरू, जस्तै वीर्य, ​​योनि, र गुदा तरल पदार्थहरूको माध्यमबाट पार गरिन्छ। यसले क्लेमिडिया र प्रमेह शामिल गर्न सक्छ। कन्डम र डेन्टल बाँध प्रयोग गर्नाले STI लाई रोक्न सक्छ जुन छाला देखि छालामा बितेको छ, मौखिक रूपमा यदि तपाईं रिम्मि intoमा हुनुहुन्छ भने।
यदि तपाईं कन्डम प्रयोग गर्नुहुन्न भने, lube प्रयोग गर्नाले तपाईंको छालामा साना आँसुहरू सिर्जना गर्ने जोखिम कम गर्न सक्दछ जसले तपाईंको STIs को सम्पर्कमा आउने सम्भावनालाई बढाउँदछ। यदि तपाईं lube वा कन्डमहरूमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं विकल्पहरूको बारेमा यहाँ अधिक पाउन सक्नुहुन्छ। केहि एसटीआईहरू, जस्तै हेपेटाइटिस ए र एचपीभी, खोपका साथ तपाइँसँग सम्पर्कमा आउनु भन्दा पहिले उनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ। तपाइँ यहाँ र कसरी एक खोप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं एच आई भी नकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यहाँ एचआईभी रोक्नको लागि अविश्वसनीय नयाँ तरिकाहरू छन्। PrEP एक दैनिक गोली हो जुन तपाईले लैंगिक हुनु भन्दा पहिले लिन सक्नुहुन्छ जुन एचआईभी संक्रमणलाई रोक्छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ पहिले नै एचआईभीको सम्पर्कमा आउनुभएको छ भने, तपाइँ HEV लाई रोक्नको लागि E२ घण्टा भित्र PEP लिन सक्नुहुन्छ। PrEP र PEP मात्र HIV लाई रोक्छ र अन्य STI लाई होईन।
जहिले जहिले पनि, तपाइँले कसरी सेक्स गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा फरक पर्दैन, हरेक to देखि months महिनामा STI टेस्ट प्राप्त गर्दा तपाइँको STI स्थिति माथि रहन मद्दत गर्दछ। यहाँ कसो गर्ने भनेर पत्ता लगाउनुहोस्, र फेरी आफुले मन पराउनुहुनेमा फर्केर आउनुहोस्।
PEP के हो?
Ke tshwanetse ke direng go netefatsa gore ke itlhatlhobela malwatsiatlhakanelo dikobo?
Ni ubuhe buryo burinda gusama inda abantu bari munzira yo kwihindura abagore/abagabo?